भारतीय बोर्ड परीक्षामा नेपाली मजदुर कृष्णकी छोरीले ल्याइन् ९६.४ प्रतिशत अंक, परिवारमा रहेन् खुशीको सिमा ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
भारतीय बोर्ड परीक्षामा नेपाली मजदुर कृष्णकी छोरीले ल्याइन् ९६.४ प्रतिशत अंक, परिवारमा रहेन् खुशीको सिमा !
Published :6August, 2020 12:49 pm
उनका भाई प्रतिकले पनि ८९ प्रतिशत अंक ल्याएर एसएसीबी बोर्ड पास गरेका छन्। नेपालको कैलालीका कृष्ण कामको खोजिमा धेरै वर्ष पहिले भारत पुगेका थिए। काम खोज्दै जाँदा उनले मुम्बईबाट करिब सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको अलिबाग जिल्लाको जिरादमा स्थानीय पोल्टी पसलमा कामका थिए। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।